Barcelona ayaa ku dhawaaqday 21 ciyaartoy
Barcelona ayaa haatan diirada saareysa Isbuuca Supercopa Isbuucaan, iyagoo xaqiijinaya 21ka ciyaaryahan ee ay u ciyaarayaan.
17 jirka Ilaix Moriba wuxuu ka mid ahaa kooxdii ugu horeysay markii ugu horeysay isbuucaan guushii ay ka gaareen Granada, laakiin warka ugu weyn ayaa ah in labo daafac oo muhiim ah ay dib ugu soo laabteen kooxda Ronald Koeman.
Clement Lenglet ayaa ka soo laabtay ganaax halka Ronald Araujo lagu soo daray kooxda inkasta oo dhaawac muruqa ah looga saaray.
Barcelona ayaa la ciyaareysa Real Sociedad semi-finalka Spanish Supercopa, halka Real Madrid ay la ciyaari doonto Athletic Bilbao semi-finalka labaad.
Kulanka Blaugrana iyo La Real ayaa dhacaya habeenka Arbacada halka Athletic ay la kulmi doonto Los Blancos habeenka Khamiista. Finalka Spanish Supercopa ayaa ka dhici doona garoonka La Cartuja Stadium ee magaalada Seville maalinta Axada.
Supercopa-ka Spanish-ka ah waxaa su’aalo iska weydiinaya kooxda ku guuleysatay La Ligaha iyo kooxihii xilli ciyaareedkii hore soo reebay ee Real Madrid iyo Barcelona iyo finalka Copa del Rey Athletic Bilbao iyo Real Sociedad inkasta oo aan wali la ciyaarin finalka maxaa yeelay taageerayaasha waxaa laga filayaa inay dib ugu soo laabtaan fagaaraha.
Madrid ayaa ku guuleysatay tartankii xilli ciyaareedkii hore waxayna finalka ka badisay Atletico Madrid oo ka dhacday Jeddah, Saudi Arabia.
axadle 5754 posts
Mesut Ozil ayaa kashifay sirta